ကငျြ့ဝတျ | နညျးပွ၏အပွညျပွညျဆိုငျရာအစညျးအရုံး
အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အစည်းအရုံးများတွင် အသင်းဝင်များကို လမ်းညွှန်မှု ပေးနိုင်ရန်နှင့် လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များ (Colleagues) ၊ ၀န်ဆောင်မှုရယူလိုသူ (Clients) များ၏မျှော် လင့်ချက်များအတွက် စိတ်ချလုံခြုံမှုပေးနိုင်ရန် အသင်း၏ယုံကြည်ချက်နှင့် မူဝါဒများထားရှိကြသည်။
တိုငျး အဆိုပါပိတျပငျပူးပေါငျးမညျသူကိုနညျးပွ® ဒီလိုကငျြ့ဝတျအခွခေံမူမြားနှငျ့ကငျြ့ဝတျမြား Code ကိုလိုကျနာဖို့အပေါငျရပါမညျ။
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူများ : ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အသွေး
အလင်းပြသူ (Coaches)များသည် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းထဲတွင် ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အသွေးကို အမြဲထိပ်တန်းအဆင့်တွင်ရှိနေရန် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
အလင်းပြသူ (Coaches) များသည် မိမိတို့တွင်ရှိသော သီးခြားကျွမ်းကျင်မှုအရည်အသွေးနှင့် အကန့်အသတ်ကိုသိရှိပြီး ရိုးသားမျှတစွာဖြင့် မိမိ၏ပုံရိပ်ကို ထင်ဟပ်စေဖို့လိုပါသည်။
အလင်းပြသူ (Coaches) များသည် မိမိတို့၏ယုံကြည်ချက်ပုံစံ၊ မိမိတို့၏တန်ဖိုးလိုအပ်ချက်များ သာမကမိမိတို့၏အကန့်အသတ်ကိုသတိပြုပြီး ဤအရာများကမိမိတို့၏အလုပ်အပေါ်သက်ရောက်မှုကို သိရှိရန်ပိုကြိုးစားရပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေအတိုင်းအတာရှိသမျှ မိမိတို့တာဝန်ယူ ဖော်ဆောင်ရသော သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအသီးသီးကို ရှင်းလင်းမှုရှိစေပြီး မိမိတို့၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ကြ ပါသည်။
အလင်းပြသူ (Coaches)များသည် မိမိတို့တစ်ဦးစီသာမက အလင်းပြခြင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ထင်ရှားမြင်သာစေမည့် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူအဆင့်အတန်းကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ပါမည်။
တစ်ပါးသူတို့၏အခွင့်အရေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားခြင်း
အလင်းပြသူ (Coaches)များတို့သည် အလင်းပြမှုခံယူသူ (Clients)များ၏ ခြားနားသောရိုးရာ ဓလေ့၊ သူတို့၏နောက်ခံထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့် အစွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် အတွင်း ရေးကိစ္စ စသည်တို့ကိုသတိမူပြီး သူတို့သိက္ခာကိုအလေးထားလျက် လေးစားစွာဆက်ဆံရပါမည်။
အလင်းပြသူ(Coaches)များသည် လူသားတိုင်း၏ အခြေခံအခွင့်အရေး၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အဖိုး ထိုက်တန်မှုနှင့် လျော်ကန်သောလေးစားမှုကို သဘောတူလက်ခံကြသည်။ လူတစ်ဦးစီ၏ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့်၊ အတွင်းရေးကိစ္စများ၊ ပုဂ္ဂလိကအမြင်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အစရှိသည်တို့ကိုလေးစားကြသည်။ ဥပဒေရေးရာနှင့်အခြားသောလုပ်ငန်းတာဝန်များက မတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဤလူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာအချက်များနှင့် ငြိစွန်းအငြင်းပွားမှုများဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သတိပြုကြသည်။ အလင်းပြသူများအနေဖြင့် ရိုးရာဓလေ့၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်အခန်းကဏ္ဍခြားနားမှုအ၀င်ဖြစ်သော အသက်အရွယ်၊ လိင်ဖြစ်တည်မှု၊ မျိုးရိုး၊ လူမျိုးစု၊ တိုင်းနိုင်ငံ၊ နေရာဒေသ၊ ဖိုမစိတ်တိမ်းညွှတ်မှု၊ မသန်စွမ်းမှု၊ ဘာသာစကားနှင့် လူမှုအခြေအနေစသည်တို့ကို တိုး၍သင်ယူခွင့်ကို အမြဲမပြတ်ရှာဖွေနေ ရပါမည်။
အထက်ပါအကြောင်းအရာများကိုအခြေခံ၍ ဖြစ်ပေါ်တတ်သော လုပ်ငန်းအတွင်းဘက်လိုက် ခြင်းများနှင့် မတရားမှုကိုသိလျက်နှင့် ပါဝင်မိခြင်း၊ လစ်လျူရှု့မိခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲခြားဆက်ဆံတတ် သောအကျင့်စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားပစ်ရပါမည်။
အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့အလင်းပြမှုခံယူလိုသူ (Clients)များကို ကူညီနိုင်ရန် စုံလင်သောအထူးပြု ပညာရပ်အသီးသီးတွင် အလုပ်လုပ်နေကြပါသည်။ အလင်းသူများသည် ကျောင်း သို့မဟုတ် မိမိကို ကူညီပေးသူ (mentor) များအားဖြင့်Coachingပညာကို တိကျသေချာစွာ သင်ယူရပြီး မိမိတို့၏ဘ၀ အတွေ့အကြုံများကို မိမိတို့၏လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်အသုံးပြုကြ ပါသည်။
အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့ကိုယ်ကို အလင်းပြသူ၊ အတိုင်ပင်ခံ၊ ပံ့ပိုးကူညီသူ စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုး ကင်ပွန်းတပ်လေ့ရှိကြပါသည်။ အလင်းပြသူတစ်ယောက်စီတိုင်းသည် မိမိတို့၏တိုးတတ်မှုကိုတိုင်းပုံ အမျိုးမျိုးကွဲပြားတတ်ကြသော်လည်း မိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ မိမိတို့အလင်းပြပေးရသောသူ(Clients) များ၏ပန်းတိုင်ကိုရရှိရေး သို့မဟုတ် ခိုင်မာသောဗျူဟာများကိုအသုံးပြုပြီး သူတို့၏ပြဿနာအခက်အခဲ များမှပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေဖို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အလင်းပြခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှုများ၏သဘောသဘာဝများ ကြောင့်ဤကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလင်းပြသူများ အခြေခံကျင့်သုံးလေ့ ရှိသော မူဘောင်များနှင့် တန်ဖိုးများကိုဖန်တီးပေးပါသည်။
ပထမအချက် - ဤဥပဒေသများသည် အလင်းပြသူများ၏ခံဝန်ချက်များအပေါ် ကျယ်ပြန့်သော နိယာမနှင့်တန်ဖိုးများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဤတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လျို့ဝှက်ချက်များ၊ အလင်းပြမှုခံယူသူ များ၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာနှင့် အောင်မြင်မှုအတွက် အစွမ်းကုန်စဉ်းစားလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ပါဝင် ပါသည်။
ဒုတိယအချက် - ဤဥပဒေများသည် အလင်းပြသူများ တွေ့ကြုံရတတ်သော အခြေအနေအမျိုးမျိုး အတွက် စည်းမျဉ်းများကို ဖန်တီးပေးသည်။
နောက်ဆုံးအချက် - ဤဥပဒေသများကို အလင်းပြသူများ၏ ကျင့်ဝတ်နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားအဆင့် ဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုတွင် ထောက်ပံ့ပေးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ အလင်းပြသူတစ်ဦးစီတိုင်းက ဤဥပဒေသများကို လိုက်နာလှမ်းလျှောက်ရန်သဘောတူကြသည့်အတိုင်း ကျင့်ဝတ်သိက္ခာအပြည့် ရှိသောလုပ်ငန်းခွင်ကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် ရာသက်ပန်ကတိက၀တ်များကို ဖြည့်စွက်တည် ဆောက်ကြရန် အလင်းပြသူများအား တိုက်တွန်းအားပေးပါသည်။
၁-၀၁ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသများ၏ လိုက်လျောညီထွေရှိမှု
(က) ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကို ဥပဒေမူဘောင်များအတွင်းရှိ ပုံမှန်အတွေ့အကြုံတစ်ခုအဖြစ် စဉ်းစား၍ရနိုင်ပေသည်။ ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကိုအလင်းပြခြင်း အသိုက်အမြုံတွင်ကျင့်သုံးကြ သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသင်းဝင်းများက ဖော်ပြထားသော တားမြစ်ချက်များအပါအ၀င် ဥပဒေသများကိုစောင့်ထိန်းလိုက်နာခြင်းသည် မိမိတို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအပြင် နှစ်ရပ်လုံးသာ မကအားလုံးအတွက် အကျိုးဖြစ်စေသောကြောင့်လက်ခံကြသည်။
(ခ) ဤကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသများသည် IAC ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသင်းဝင်အားလုံးကိုထင်ရှား မြင်သာစေပါသည်။ ဤဥပဒေသများတွင် အမှန်တကယ်လိုအပ်အရေးပါသော အနိမ့်ဆုံးအလေ့အထ စံနှုန်းကိုညွှန်ပြနေသောအသင်းဝင်များက လိုက်နာရမည့်တုန့်ပြန်ချက်များပါဝင်သည်။ ဤဥပဒေသ များကိုနှုတ်သက်သက်မဟုတ်ဘဲ နှလုံးသားထဲမှလိုက်နာလိုက်လျှောက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
(ဂ) အလင်းပြသူ (Coach)တစ်ယောက်၏ကိစ္စရပ်များကို ဤကျင့်ဝတ်ဥပဒေသများအရပြန်လည် သုံးသပ်ရာတွင် ထိုကိစ္စများသည် မိမိတို့၏အလင်းပြခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်နှင့် ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာသော အပိုင်းဖြစ်ပါက ဤကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများဖြင့်သာ ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်ရမည်။
၁-၀၂	ကျင့်ဝတ်များနှင့် ဌာနေတိုင်းပြည်၏ ဥပဒေတို့ဆက်နွယ်မှု
(က) အကယ်၍ အလင်းပြသူ (Coach)က လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ဌာနေတိုင်းပြည်၏ ဥပဒေများက IAC ၏ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများထက် ပိုမိုအရေးပါအရာရောက်ခဲ့လျှင်ပင် အလင်းပြသူ (Coaches)များက IAC ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသများကို အတတ်နိုင်ဆုံးစောင့်ထိန်းလိုက်နာရန် ကြိုးစားရမည်။
(ခ) အလင်းပြသူတစ်ယောက်သည် ဥပဒေပ ကိစ္စရပ်များဖြစ်သော မူပိုင်ခွင့်ကိစ္စရပ်များ၊ တီထွင်ဖန်တီး မှုဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးနှင့် မပတ်သက်ရ။
၁-၀၃ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆက်နွယ်မှု
(က) အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့၏၀န်ဆောင်မှုများကိုပေးစွမ်းရာတွင် IAC ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စံနှုန်းအတိုင်းသာ လုပ်ဆောင်ရမည်။
(ခ) ယုံကြည်မှုနှင့် တာဝန်ခံမှုသည် အလင်းပြခြင်းကမ္ဘာ၏ ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အလင်းပြသူ (Coaches)များက မိမိတို့ထံမှအလင်းပြမှုခံယူသူ (Clients)များ၊ မိမိတို့၏အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှသူများ သာမက မိမိကိုယ်ကိုပင် ဂုဏ်သိက္ခာသမာဓိရှိစွာ ဆက်ဆံပြုမူကြရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
၁-၀၄ အလင်းပြခြင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေး
(က) အလင်းပြသူ (Coach) တစ်ယောက်သည် မိမိပြောဆိုဖော်ပြသော မိမိ၏အရည်အသွေးစံနှုန်း ပြည့် မီရန် အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်မှုပြုရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ၏ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အသွေးထက် ပိုမို၍ဖော်ပြပြော ဆိုခြင်းမျိုးကို မပြုလုပ်ရပါ။
(ခ) အလင်းပြသူ (Coaches)များသည် မိမိတို့၏လေ့လာသင်ယူအားထားမှု သို့မဟုတ် လျောက်ပတ် သောကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံကိုသာ အခြေခံ၍ ကျွမ်းကျင်မှုနယ်နမိတ်အတွင်း၌သာ ၀န်ဆောင်မှု ပေးရမည်။ အလင်းပြသူ (Coaches)များသည် မိမိတို့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုရှိသော အလုပ်ကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။
၁-၀၅ မိမိ၏ကျွမ်းကျင်မှုပညာကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
(က) အလင်းပြသူ (Coaches)များသည် မျက်မှောက်စီးပွားရေးကျင့်ထုံးများနှင့် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းခွင် အတွင်းရှိသတင်းအချက်အလက်များကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအဆင့်တစ်ခုအထိသိရှိနေရမည် ဖြစ်ပြီး မိမိတို့အသုံးပြုနေသောပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးစားအားထုတ်ရမည်။
(ခ) အလင်းပြသူ (Coaches)များသည် အလင်းပြခြင်းပညာရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အသစ်သောနည်း ပညာများ၊ ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များနှင့် စံနှုန်းများကို အမြဲထိတွေ့သိရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ရမည်။
၁-၀၆	အလင်းပြခြင်း(Coaching) ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
(က) အလင်းပြသူများအနေဖြင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုအတွက် အလင်းပြခြင်းလုပ်ဆောင်ပေးရသောအချိန်များတွင် (ရလဒ်စစ်ဆေးမှုအပါအ၀င်) သင့်တင့်လျောက် ပတ်ပြီးတစ်ဖက်လူနားလည်နိုင်သော ဘာသာစကားနှင့် စကားလုံးအသုံးအနှုန်းများကို အသုံးပြုကြရပါ သည်။
(ခ) အလင်းပြသူများအနေဖြင့် အလင်းပြခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရယူမည့်သူတစ်ဦးချင်းစီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများသို့ သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များပေးရန်အတွက် တရားဥပဒေအရ သို့မဟုတ် မည်သည့်အကြောင်းအရင်းကြောင့်မဆို တားမြစ်ခံထားရခြင်းရှိပါက သက်ဆိုင်ရာအလင်းပြမှုခံယူမည့် သူများကို ကြိုတင်အသိပေးထားရပါမည်။
(က) လူတစ်ဦးချင်းစီကိုလေးစားမှုရှိခြင်းသည် အလင်းပြခြင်း၏အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးအတွက် အရေးပါသော အုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
(ခ) မိမိတို့၏အလင်းပြခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အလင်းပြသူများသည်တစ်ပါးသူ တို့၏ အခွင့်အရေးနှင့်တန်ဖိုး၊ စိတ်နေသဘောထားနှင့် မိမိတို့နှင့်ကွဲပြားနေနိုင်သောအမြင်တို့ကို လေးစားကြရပါမည်။
၁-၀၈	မျှတမှုမရှိ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း
အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့၏အလင်းပြခြင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ရာတွင် မည့်သည့် အကြောင်းအရာ အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို မျှတမှုမရှိ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုလုပ်ရ။
(က) အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့၏အလုပ်တွင်ဆက်ဆံရသောသူများကို အနှောက်အယှက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် အနှောက်အယှက်ပေးသောသဘော သက်ရောက်သည့် အပြုအမူမျိုးကိုမပြုလုပ်ရ။
(ခ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောက်အယှက်ပေးခြင်းသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြူဆွယ်ခြင်း၊ ကိုယ်ထိလက် ရောက်ကျူးလွန်ခြင်း သို့မဟုတ် နှုတ်အားဖြင့်လည်းကောင်း နှုတ်အားဖြင့်မဟုတ်သော အပြုအမူတို့ဖြစ် ပါသည်။ အလင်းပြသူများသည် မည်သည့်အနှောက်အယှက်ပေးခြင်မျိုးကိုမဆို အမြဲတမ်းရှောင်ရှားပြီး သင့်တော်ကောင်းမွန်သော အပြုအမူမျိုးရှိစေရန်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
၁-၁၀	ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြဿနာနှင့် သဘောထားကွဲလွဲမှုများ
(က) အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြဿနာများ တွေ့ကြုံရ နိုင်ကြောင်းနှင့် ထိုပြဿနာများက အလင်းပြသူနှင့်ခံယူသူကြား ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုအတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းကို သိရှိကြပါသည်။ အလင်းပြသူများကဤကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို မိမိတို့၏အလင်းပြမှုခံယူသူများအား လိုအပ်သလိုအသိပေးခြင်းဖြင့် သင့်တော်သော လုပ်ဆောင်မှုကို အတူတကွ ဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(ခ) ထို့အပြင် အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြဿနာများကို ဖော်ပြခြင်းနှင့််အကူ အညီရယူခြင်းများကို ကနဦးအဆင့် ကတည်းက ရယူရမယ့်တာဝန်ရှိပြီး ဤသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အလင်းပြခြင်းဆိုင်ရာ မိမိတို့၏ပြုမူဆောင်ရွက်မှုများကို နှောင့်ယှက်ထိခိုက်စေခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ) အလင်းပြသူများက မိမိတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြဿနာများက အလင်းပြခြင်းလုပ်ဆောင်နေမှု နှင့်ဆက်စပ်သောဝတ္တရားများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်စွက်ဖက်မှုရှိလာခြင်းကိုသတိထားမိသောအခါတွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှု သို့မဟုတ် အကူအညီရယူခြင်းဖြင့် သင့်တော်သောချိန်ညှိမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုမှတဆင့် မိမိတို့လုပ်ဆောင်နေသောအလင်းပြခြင်းအစီအစဉ်ကို ကန့်သတ်ခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်တန့်ခြင်း စသည်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၁-၁၁	တိုးတတ်မှုအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်း
အလင်းပြသူများသည် လက်တွေ့ကျသောလုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်ကို အလင်းပြမှုခံယူသူ၏ တိုးတတ်မှုများအဖို့အလို့ငှာ လုပ်ဆောင်ရပါသည်။ တိုးတတ်မှုမရှိသောအခြေအနေရှိခဲ့ပါမူ အလင်းပြမှု ခံယူသူအတွက် ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကြိုးပမ်းရသည်။
နညျးပွ '' သွဇာလှမျးမိုးမှု၏ 1.12 တလှဲအသုံးပွုခွငျး။
နညျးပွ '' ပရျောဖကျရှငျနယျစီရငခြကြွမွားနှငြ့လုပျရပျမြားတခွားသူတှရေဲ့ဘဝတှကေိုအကြိုးသကျရောကျမှုရှိနိုငျပါသညျသောကွောငျ့, သူတို့မှသတိပေးခကျြဖွဈကွပွီး, ပုဂ်ဂိုလျရေးဘဏ်ဍာရေး, လူမှုရေး, စညျးရုံးရေး, ဒါမှမဟုတျသူတို့ရဲ့သွဇာလှမျးမိုးမှုအလှဲသုံးစားလုပျဖို့ဦးဆောငျလမျးပွအံ့သောငှါနိုငျငံရေးဆိုငျရာအခကျြမြားဆနျ့ကငျြစောငျ့ရှောကျလော့။
နညျးပွ '' သူ Work ၏ 1.13 တလှဲအသုံးပွုခွငျး။
(က) အလင်းပြသူများသည်မိမိတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများကိုတခြားသူက အလွဲသုံးစားပြုနိုင်မည့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါက ထိုကိစ္စရပ်များတွင် မပါဝင်ရ။
(ခ) အလင်းပြသူများက မိမိတို့၏အလုပ်နှင့်စပ်ဆိုင်ပြီးနားလည်မှုလွဲခြင်း သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်ခြင်းကိုသိရှိပါက ထိန်းညှိပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သည်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည် သို့မဟုတ် ထိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းကို အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရမည်။
၁-၁၄	အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်ငြိစွန်းမှု
(က) အလင်းပြသူ (Coach) တစ်ယောက်သည် မိမိ၏ရှိနှင့်နေပြီးသား ရင်းနှီးဆက်နွယ်မှုများက အပြန် အလှန်အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်ငြိစွန်းမှုဖြစ်စေနိုင်သော အခြေအနေတစ်ခုတွင် မိမိလုပ်ဆောင်ရန်ရှိ သောလုပ်ငန်းတာဝန်ကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
(ခ) ကြိုမမြင်နိုင်သောအကြောင်းအရာများက အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သော အခြေ အနေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက အလင်းပြသူသည် အလင်းပြခြင်းကျင့်ဝတ်ဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာပြီး ပါဝင်ပတ်သက်သူ၏ အကောင်းဆုံးအကျိုးရလဒ်အတွက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးရ ပါမည်။
၁-၁၅	ဖလှယ်ခြင်း (၀န်ဆောင်မှုနှင့် ၀န်ဆောင်ခ)
ခေါင်းပုံဖြတ်မှုမရှိသောဆက်ဆံရေးတစ်ခုတွင်သာ အလင်းပြသူက ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ၀န်ဆောင်ခဖလှယ် ခြင်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်။ အလင်းပြသူ (Coaches)များအနေဖြင့် မိမိတို့လုပ်ဆောင်ပေးရသော အလင်းပြခြင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကုန်ပစ္စည်း၊ ၀န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ်ငွေကြေးနှင့် မသက်ဆိုင်သော ၀န်ဆောင်မှုအခကြေးငွေပေးချေမှုအတွက် လွတ်လပ်စွာညှိနှိုင်းလက်ခံနိုင်ပြီး သတ်မှတ်နိုင်ငံ၏၀င်ငွေ ခွန်ကန့်သတ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအတိုင်းဖြစ်ရမည်။
(က) အလင်းပြသူ (Coaches)များသည် မိမိတို့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိနေနိုင်သောသူများကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းမရှိရ။
(ခ) အလင်းပြသူ (Coaches)များသည် မိမိတို့သုံးသပ်ကူညီပေးနေရသူ သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်သြဇာ သက်ရောက်မှုရှိနေနိုင်သူများနှင့် လိင်မှုဆိုင်ရာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုမရှိရ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးမျိုးကို ခေါင်းပုံဖြတ်မှုအဖြစ် ရှု့မြင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အလင်းပြသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏အလင်းပြမှုခံယူသူ(Clients)များကိုထိရော်လျော်ညီစွာ ၀န်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့တွေ့ရှိချက်အရသော်လည်းကောင်း၊ သင့်လျော်လိုအပ်ချက်ကြောင့်သော် လည်းကောင်း အခြားသောပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရပါမည်။
၁-၁၈ တတိယလူ(ဘေးလူ)က ၀န်ဆောင်မှုတောင်းခံခြင်း
(က) အလင်းပြသူက တတိယလူ(ဘေးလူ)တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အလင်းပြခြင်းဝန်ဆောင်မှုပေးရန် တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်သဘောတူညီထားလျှင် ၀န်ဆောင်မှုစတက်မပေးမီကတည်းက ထိုသူတို့တစ်ဦး ချင်းစီ၏ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုသဘာဝကို တတ်နိုင်သမျှရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိထားနိုင်ရန်လုပ် ဆောင်ရမည်။
(ခ) နညျးပွရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တတိယပါတီမြား၏ပါဝငျပတျသကျမှု၏ပဋိပက်ခဖွဈအခနျးကဏ်ဍဖြျောဖွဖေို့ဌနာခံတဈဦးကာလတှငျအန်တရာယျလညျးမရှိလြှငျ, နညျးပွသူသို့မဟုတျသူမ၏တာဝနျဝတ်တရား၏သဘောသဘာဝနှငျ့ဦးတညျခကျြရှငြး, သငျ့လြျောစှာကိစ်စရပျမြားအဖွဈအကွောငျးကွားအားလုံးပါတီမြားဖှံ့ဖွိုးစောငျ့ရှောကျ နှငျ့ဤကငျြ့ဝတျ Code ကိုနှငျ့အညီအခွအေနကေဖွရှေငျး။
၁-၁၉	မိမိလက်အောက်ဝန်ထမ်းကို တာဝန်ခွဲပေးခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်စီမံခြင်း
(က) အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့၏၀န်ထမ်း သို့မဟုတ် လက်ထောက်များကို တာဝန်ခွဲပေးရာတွင် ထိုသူတို့သည်ပေးအပ်သောတာဝန်ကို ပိုင်နိုင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်နိုင်ရမည်။ ထိုသို့ဆို ရာ၌ထိုသူတို့၏ပညာရေး၊ သင်တန်းသို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံများကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ် မှုအောက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေများကို အခြေခံသည်။
(ခ) အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့ဝန်ထမ်းများအတွက် သင်တန်းများကိုပေးခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်မှုကို စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ပြီးလျှင်ထိုဝန်ထမ်းတို့၏တာဝန်ယူမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကျင့်ဝတ် ဆိုင်ရာလိုက်နာကျင့်သုံးမှုများကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်းကြပ်မတ်စောင့်ကြည့်နိုင်ရန် လိုအပ်သော ကြီးကြပ်မှုများကို တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
၄-၀၃	မှတ်တမ်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များပြုစုစီမံခြင်း
(က) အလင်းပြသူ (Coaches)များသည် မိမိတို့၏အလင်းပြခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများ၊ မိမိတို့လုပ် ဆောင်မှုပြုနေသော တိုင်းပြည်၏ဥပဒေနှင့်အညီလုပ်ဆောင်သော အခြားလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ဤကျင့် ၀တ်ဆိုင်ရာဥပဒေသများ၏ လိုအပ်ချက်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလိုသည့် စိတ်သဘောထားများ စသည့်အချက်များနှင့် ဆက်စပ်လျက် မှတ်တမ်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုဖန်တီးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ကိုင်စွဲကျင့်သုံးခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
(ခ) အလင်းပြသူ (Coaches)များအနေဖြင့် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းများတွင် အနာဂါတ်အတွက်ထောက်ပံ့မှု ရရှိစေရန်၊ တာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိစေရန်နှင့် တိုင်းပြည်၏အခြားသောဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆီးပေးနိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့လုပ်ဆောင်မှုများကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ထိန်းသိမ်းစီမံထားကြ ရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
၁-၂၁	အခကြေးငွေနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအစီအမံ
(က) ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတစ်ခုတွင် အလင်းပြသူနှင့်အလင်းပြမှုခံယူသူ သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုရယူသူများအကြား သင့်ငွေတောင်းခံခြင်း၊ နစ်နာကြေးပေးဆောင် ခြင်းအစရှိသော ငွေကြေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုကို တတ်နိုင်သည့်အတိုင်း စောနိုင်သမျှစောအောင် စီမံရမည်။
(ခ) အလင်းပြသူများသည် ၀န်ဆောင်မှုကျသင့်ငွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုရယူသူ သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်ခပေးမည့်သူအပေါ် အမြတ်ထုတ်ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းမပြုရ။ အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့၏ ၀န်ဆောင်မှုအတွက် ကျသင့်ငွေကိုမှားယွင်းဖော်ပြခြင်း မရှိစေရ။
(ဂ) ငွေကြေးအကန့်အသတ်ကြောင့် မိမိတို့၏၀န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကန့်သတ်မှုများရှိလာနိုင် သည်ဟုမျှော်လင့်ပါကအလင်းပြမှုခံယူသူ သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုတောင်းခံသူနှင့်တတ်နိုင် သည်အတိုင်းစောနိုင်သမျှစောအောင် ကြိုတင်ဆွေးနွေးမှုပြုရမည်။
(ဃ) ၀န်ဆောင်မှုခံယူသူ သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုတောင်းခံထားသူက သဘောတူညီထား သည့်အခကြေးငွေကို ပေးချေခြင်းမရှိ၍ အလင်းပြသူက ငွေကြေးကောက်ခံပေးသော ကိုယ်စားလှယ်မှ တဆင့် သို့မဟုတ် တရားဥပဒေနှင့်အညီတောင်းခံမှုပြုလုပ်လိုပါက မိမိလုပ်ဆောင်မည့်အကြောင်း အရာကို ထိုသက်ဆိုင်သူများအား ကြိုတင်အသိပေးခြင်းဖြင့် ထိုသူတို့ပေးချေရန်ရှိသည်များကိုအမြန် ဆုံးပေးချေနိုင်ခွင့်ပေးရမည်။
၁-၂၂	ငွေပေးချေသူအတွက် တိကျသောစာရင်းတင်ပြမှု
ငွေပေးချေသူများသို့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စာရင်းများတင်ပြရာတွင် အလင်းပြသူများသည်ပေးရသော ၀န်ဆောင်မှုသဘောသဘာဝ ကျသင့်ငွေကြေး သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုအဖိုးအခများကို တိကျရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရမည်။
တဈနညျးပွခတြေဲ့အခါ, ကနငှေပေေးခအြေားလကျခံတှဆေုံ့, သို့မဟုတျအခွားတဈဦးအလုပျရှငျအတှကျထကျအခွားပရျောဖကျရှငျနယျတှနေဲ့အခကွေးငှအေပိုငျးသုံးပိုငျး - ဝနျထမျးဆကျဆံရေးဟာတဈဦးခငျြးစီရနျငှပေေးခမြှေု (အတိုငျပငျခံအုပျခြုပျရေးသို့မဟုတျအခွားလှဲပွောငျး) ဝနျဆောငျမှုမြားအပျေါအခွခေံသညျထောကျပံ့ခွငျး, စာအရေးအသားအတှကျသဘောတူညီခဲ့တာဖွဈပါတယျ ထိတှဆေ့ကျဆံမှု၏တငျသညျ့မှကွိုတငျ။
၂။ကြော်ငြာခြင်း၊ အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ချက်
ကြော်ငြာခြင်း၊အများပြည်သူသို့ထုတ်ပြန်ချက်ဟုဆိုရာ၌ အလင်းပြခြင်း(Coaching)နှင့်ပတ်သက်သည့် (လက်ကမ်းစာစောင်၊ စာမူ၊ မိန့်ခွန်း သို့မဟုတ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းအချက် စသည်) ရေးသား ထားသော စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် နှုတ်ထွက်ထုတ်ပြန်ချက် အားလုံးကိုဆိုလိုပါသည်။
အလင်းပြသူများက အများပြည်သူအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် မိမိတို့တိတိကျကျတောင်းဆိုခြင်း ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မတောင်းဆိုဘဲဖြစ်စေ အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ကြောင်းနား လည်ထားကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ အလင်းပြသူများက ထိုသို့သောအများပြည်သူအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်များသည် လှည့်စားမှုမပါ မှန်ကန်မှုအပြည့်ရှိစေရန် တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးကြိုးစား ရမည်။
၂-၀၃ မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များကို ရှောင်ရှားခြင်း
အလင်းပြသူများသည် မည့်သည့်အခြေအနေ၌မဆို မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များကို အများပြည်သူ သို့မထုတ်ဝေရန် သဘောတူကြသည်။ ထိုသို့မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်ဆိုရာ၌ အလင်းပြသူ၏ သင်တန်းများ၊ အတွေ့အကြုံများနှင့် မိမိတို့ကောက်ခံသော အခကြေးငွေများစသည်ဖြင့် ပါဝင်သည်။
၃။ အလင်းပြခြင်း ဆက်ဆံရေး
(က) အလင်းပြသူများက မိမိတို့၏အလင်းပြခြင်းအတွက် ကောက်ခံသည့်အခကြေးငွေကို ၀န်ဆောင်မှု ရယူမည့်သူအား ပထမဆုံးအလင်းပြခြင်းအချိန်မတိုင်မီ ကြိုတင်ရှင်းပြပေးရမည်။
(ခ) အလင်းပြသူများက မိမိတို့၏အလင်းပြခြင်းဆက်ဆံရေးတွင်အရေးပါသော ကိစ္စရပ်ကိုစောနိုင်သမျှ စောစီးစွာဆွေးနွေးရန် သဘောတူကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အတွင်းရေးလျို့ဝှက်ချက် (အတွင်းရေးလျို့ဝှက်ချက်အကန့်အသတ် အတွက် ဆွေးနွေးခြင်းတွင်ရှု)
(ဂ) အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့ထံတွင် အလင်းပြမှုခံယူသူများကိုလိုအပ်ပါက အခြားသောပညာရှင် များထံ ရည်ညွှန်းလွှဲပြောင်းပေးရန် သဘောတူကြသည်။ အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့ထံတွင်အလင်း ပြမှုခံယူနေသူများ၌ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်သည့်ပြဿနာများရှိကြောင်း တွေ့မြင်ကြားသိရလျှင် ထိုသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုပေးသူ၊ စိတ်ကုထုံးဖြင့်ကုသသူ သို့မဟုတ် စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ထံ တတ်နိုင်သမျှအစောဆုံးညွှန်းဆိုပေးရပါမည်။
(ဃ) နညျးပွ client မြား '' မေးခှနျးတှရေဲ့အဖွအေဖွဈခကျြခငျြးဖွဈနိုငျသမြှနညျးပွအလုပျကိုအကွောငျးကို၎င်းငျးတို့၏စိုးရိမျမှုမြားကိုဖွရှေငျးရနျကွိုးပမျးပါစေ။ ဘယျအခြိနျမှာမရရှိနိုငျပါ, တဈဦးနညျးပွနညျးပွအကွောငျးကိုတိကတြဲ့စိုးရိမျပူပနျမှုမြားဖွရှေငျးရနျစာရေးသားသတငျးအခကျြအလကျပေးပါလိမျ့မယျ။
၃-၀၂	ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးခြင်းနှင့် ချမ်းသာသုခ
(က) အလင်းပြသူ (Coach)အယောက်စီတိုင်းက အလင်းပြမှုခံယူသူ သို့မဟုတ် အခြားသောသူတစ်ဦး ဦး၏အန္တရာယ်ကင်းဝေးရေးနှင့် ချမ်းသာသုခသည် ခြိမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ် အခြေအနေတွင်ရှိနေ ကြောင်းသိရလျှင် သင့်လျော်သော စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင် သို့မဟုတ် အရေးပေါ်ဌာနပညာရှင်များ ဆီသို့အစောဆုံးညွှန်းဆို ပို့ဆောင်ပေးရမည်။ အဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေတစ်ခုတွင်ရောက်ရှိနေလျှင် အလင်းပြသူက အလင်းပြမှုခံယူနေသူကိုယ်စား သင့်လျော်သော စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင် သို့မဟုတ် အရေးပေါ်ဌာန ပညာရှင်များကို ဆက်သွယ်ကူညီပေးမှု လုပ်ဆောင်ရမည်။
(ခ) အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့ထံတွင် အလင်းပြမှုခံယူနေသူ (Clients)များက စိတ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့် မိမိကိုယ်ကို သို့မဟုတ် အခြားသောသူတစ်ဦးဦးကို ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်စေနိုင်သော ခြိမ်းခြောက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သောအခြေအနေတစ်ခုတွင် ထိုသူ၏စိတ်ကျန်းမာ ရေးအခြေအနေ သို့မဟုတ် ပြဿနာတစ်ခုခုကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခြင်း မပြုလုပ်ရ။ မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကို အခြေခံလုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလင်းပြသူ(Coaches)များအား ထိုကဲ့သို့စစ်ဆေးခြင်း၊ ဖော်ထုတ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် လေ့ကျင့် ပေးထားခြင်း၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားခြင်း မရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ) အလင်းပြမှုခံယူသူက မိမိတို့သည် အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ခုကိုထိခိုက်စေခြင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ပြုမိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခြင်းရှိသောအခါ အလင်း ပြသူ(Coaches)များက သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ အာဏာပိုင်များကို အကြောင်းကြားရမည်။ ထိုထိခိုက် ခြင်းသို့ အန္တရာယ်ပြုခြင်းခံရသောသူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ကိုလည်း အလင်းပြသူကပင်အသိပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားရမည်။ အလင်းပြသူအနေဖြင့်ထိုသူနှင့်ပတ်သက်သော စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာသည် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြစ်အံ့ဆဲဆဲဥပဒေကိစ္စရပ်တစ်ခုခု ဟုတ်၊ မဟုတ် ခွဲခြားသိမှတ်ရန် မလို အပ်ပေ။
၃-၀၃ စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်၌ ကုသမှုခံယူသူအား အလင်းပြပေးခြင်း
အလင်းပြသူအယောက်စီတိုင်းသည်စိတ်ကုထုံးသို့မဟုတ် အခြားစိတ်ကျန်းမာရေးကုသမှုတစ်မျိုးမျိုးကို လက်ရှိခံယူနေရသောသူအတွက် အလင်းပြပေးခြင်းလုပ်ဆောင်မည် မလုပ်ဆောင်မည်ကို ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ရမည်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်အနေဖြင့် ထိုသို့ဆုံးဖြတ်ရာ၌ ထိုသူ၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ထောက်ထားချင့်ချိန်၍ ဆုံးဖြတ်ရမည်။
၃-၀၄	အလင်းပြမှုခံယူသူနှင့် လူမှုရေးဖောက်ပြားမှု
အလင်းပြသူများသည် အလင်းပြမှုခံယူသူများနှင့် လူမှုရေးဖောက်ပြားမှု ရောထွေးပတ်သက်မှုမရှိစေရန်သဘော တူညီကြသည်။
အလင်းပြသူများက အလင်းပြခြင်းလုပ်ဆောင်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် မည်သည့်ကိစ္စမျိုးကို မဆို ဟန့်တားနိုင်ရန် အခြားသောအစီအမံများကို အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြင်ဆင်ထားရမည်။ တစ်လ ထက်မက ပို၍ကြာမြင့်နိုင်သော ရေရှည်အနှောင့်အယှက် အဟန့်အတားများအတွက် အလင်းပြသူက အလင်းပြမှုခံယူသူအား အခြားသင်လျေ့ာ်သော အလင်းပြသူထံသို့ မိတ်ဆက်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်သင့်ပေသည်။
၃-၀၆ အလင်းပြခြင်းကို ရပ်တန့်ခြင်း
အလင်းပြမှုခံယူသူက အလင်းပြခြင်းအစီအစဉ်ကြောင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက် ခံစားရခြင်း တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာသိရှိရလျှင် အလင်းပြသူသည် ထိုအလင်းပြခြင်း ဆက်ဆံရေးကိုရပ်တန့်ရန်သဘောတူသည်။ ထိုသို့ရပ်တန့်ရာတွင် အလင်းပြသူကအခြားသောအစီ အစဉ်ကိုအကြံပြုခြင်း၊ အခြားအလင်းပြသူထံလွှဲပြောင်းပေးခြင်း သို့မဟုတ်အခြားသောပညာရပ်များကို ညွှန်းဆိုပေးခြင်းဖြင့် သင့်တော်သည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးရမည်။
၄။ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လျှို့ဝှက်ချက်
ဤစံနှုန်းအချက်အလက်များသည် အလင်းပြသူအားလုံး၏ ပညာရှင်အဆင့်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် သက်ရောက်မှုရှိသည်။
၄-၀၁ လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ကန့်သတ်ခြင်း
(က) အလင်းပြသူများက အလင်းပြမှုခံယူသူများ၏ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို လေးစားကြရမည်။ အလင်းပြခြင်းအတွက်လိုအပ်မှု သို့မဟုတ် သုတေသနပြုလုပ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်ချက်မျိုး မှလွဲ၍ အလင်းပြမှုခံယူသူ၏ ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များကို တောင်းခံခြင်းမပြုရ။ ဖွင့်ဟမှု တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ဤလျှို့ဝှက်ချက်ထိန်းသိမ်းပေးရေး စံများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
(ခ) ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝမဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေမှလွဲ၍ အလင်းပြခြင်း မစတင်မီနှင့် စတင်ပြီးနောက်များတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေး သဘောတူညီမှုယူခြင်းကို လိုအပ်သလို လုပ်ဆောင်ရမည်။
(ဂ) အလင်းပြသူများသည် အလင်းပြမှုခံယူသူအပြင် အခြားစိတ်ဝင်စားသူများနှင့်အတူ အလင်းပြသူ၏ အတွင်းရေးကိစ္စထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်သော သဘောသဘာဝနှင့်အကန့်အသတ်တို့ကိုဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ရမည်။ အလင်းပြသူအနေဖြင့် ထိုလျှို့ဝှက်ချက်များကိုတောင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် ဖွင့်ဟခံရခြင်း အခြေအနေမျိုးကို သေချာစွာစူးစမ်း စီစစ်ရမည်။
(ဃ) ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဖြစ်မနေဖွင့်ပြောရန် လိုအပ်သောအချက်မှလွဲ၍ အလင်းပြခြင်းလုပ်ဆောင် စဉ်အတွင်းရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ အားလုံးသည် လျှို့ဝှက်ချက်များဖြစ်သည်။ အလင်း ပြမှုခံယူသူသို့မဟုတ် အခြားသူတစ်ဦးဦးအတွက် ဖြစ်အံ့ဆဲဆဲထိခိုက်နစ်နာမှုများကိုကြိုတင်မြင်ရသော အခြေအနေမျိုးတွင် ထိုလျှို့ဝှက်ချက်များကို ချွင်းချက်အနေဖြင့် ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ အခြေအနေ အရပ်ရပ်တွင် အလင်းပြသူသည် မိမိဖော်ထုတ်ရမည့် အချက်အလက် ပမာဏကို ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် ဂရုတစိုက်ချိန်ဆမှုပြုရမည်။
၄--၀၂	လျှို့ဝှက်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
(က) အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုပေးရသောသူများ၏ လျှို့ဝှက်ချက်ထိန်းသိမ်း ခွင့်ကိုကာကွယ်ပေးရန် အခြေခံကျကျ သတိထားနှိုင်းဆမှုပြုပေးရမည်။ ပညာရှင်ပီသသော ဆက်ဆံ ရေး၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏စည်းမျဉ်း သို့မဟုတ် ဥပဒေများက ကိုယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်ကြောင်း၊ အလင်းပြသူများက အသိအမှတ်ပြုလက်ခံကြသည်။
(ခ) အလင်းပြသူများသည် ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးနိုင်သောအခြေအနေမှလွဲ၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လျှို့ဝှက်ချက်များကို မည့်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မှ ဆွေးနွေးခြင်းမပြုရ။
(ဂ) အလင်းပြသူများသည် ဆီလျော်သောပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စ၊ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းနှင့်သိပ္ပံပညာရပ် ဆိုင်ရာအကြောင်းကိစ္စများအတွက်သာလျှင် ထိုလျှို့ဝှက်ချက်သတင်းအချက်များကို ဆွေးနွေးနိုင်ပြီး ထိုကိစ္စရပ်များနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သူများနှင့်သာ ဆွေးနွေးရမည်။
(ဃ) အလင်းပြသူများသည်ပြည်သူများနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာတင်ပြမှု၊ ရေးသားမှုအပါအ၀င် မီဒီယာများ နှင့်ဆက်ဆံရာတွင် မိမိတို့ထံတွင်အလင်းပြမှုခံယူသူ (Clients)များ၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရန်အထူးသတိပြုရမည်။ ထို့အပြင်ထိုအလင်းပြသူများကို သိရှိခြင်းမရှိစေရန်အတွက်အလင်း ပြသူများက ထိုလျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖုံးကွယ်ပေးထားရမည်။ အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့၏အလင်းပြ သူ(Clients) သို့မဟုတ် ဥပဒေကြောင်းအရ အခွင့်အာဏာရှိသူတို့ထံမှ သဘောတူခွင့်ပြုချက်စာကို ရရှိ မှသာလျှင် ထိုလျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြောဆိုခွင့်ရမည်။
(င) ဆွေးနွေးအကြံပေးမှုအစီအစဉ်တွင် အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့နှင့်လျှို့ဝှက်ဆက်ဆံရေးရှိ နေသော မိမိတို့၏အလင်းပြမှုခံယူသူ (Clients)များကို ဖော်ထုတ်သိရှိသွားစေနိုင်သော အခြေအနေမျိုး ကိုဖြစ်စေနိုင်သည့် လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်များကို ဝေမျှခြင်းမပြုရ။ စာဖြင့်ရေးသားထားသောကြိုတင် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားခြင်း သို့မဟုတ် ရှောင်လွှဲ၍မရသောအကြောင်းအခြေအနေတွင်သာ ထိုသတင်း အချက်အလက်များကိုမျှဝေရမည်။ ထို့အပြင်အလင်းပြသူများသည် ထိုဆွေးနွေးအကြံပေးမှု အစီ အစဉ်၏ရည်မှန်းချက်(မျှော်မှန်းချက်) ကိုရရှိစေရန် လိုအပ်သလောက်သာ သတင်းအချက်အလက်များ ကိုမျှဝေရမည်။
(စ) အလင်းပြသူများသည် အလင်းပြခြင်းလုပ်ဆောင်မှုကို ရပ်တန့်ခြင်း၊ အလင်းပြခြင်းခံယူသူများ မသန်စွမ်းဖြစ်သွားခြင်း သို့မဟုတ် ကွယ်လွန်သွားခြင်း အခြေအနေများတွင် ထိုသူတို့၏လျှို့ဝှက်ချက် များကိုကာကွယ်ရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရမည်။
(ဆ) အလင်းပြသူများသည် ကွယ်လွန်သွားသော အလင်းပြမှုခံယူသူများ၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဤကျင့်ဝတ်ဥပဒေအတိုင်း ကာကွယ်ပေးရမည်။
(က) အလင်းပြသူများသည်အလင်းပြမှုခံယူသူများ၏မှတ်တမ်းများအား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းအစရှိသည်တို့ကို ဌာနေတိုင်းပြည်၏ ဥပဒေနှင့်အလင်း ပြခြင်းဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်မူဝါဒများနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ထိုလျှို့ဝှက်ချက်များကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှုပြုရပါသည်။
(ခ) အလင်းပြသူများသည် တယ်လီဖုန်း၊ voice mail၊ ကွန်ပျူတာ၊ အီးလ်မေး၊ ဖက်(စ်)နှင့်အခြားသော ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတစ်ခုခုဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုထားသော လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကို သေချာစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လိုအပ်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
(ဂ) အလင်းပြသူသည် အလင်းပြမှုခံယူသူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုပေးနိုင်ရန် အတွက် မှတ်တမ်းများကို ရယူနိုင်သောအခြေအနေတွင် ရှိနေစေရန်လိုအပ်သော ဥပဒေရေးရာ လက်တွေ့ကျသည့် လုပ်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးရပါမည်။
(က) ဥပဒေအရေးအကြောင်းမှလွဲ၍ အလင်းပြသူများသည် အလင်းပြမှုခံယူသူ၏ လျှို့ဝှက်သတင်း အချက်များအား ကာယကံရှင် သို့မဟုတ် ကာယကံရှင်ကိုယ်စား ဥပဒေကြောင်းအရအခွင့်ရသူ၏ စာဖြင့်ရေးသားသော ခွင့်ပြုချက်ရမှသာ ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ပြောဆိုရမည်။
(ခ) ထိုသို့ခွင့်ပြုချက်မပါရှိသောအခြေအနေတွင် အလင်းပြသူသည် တရားဥပဒေအရပြဌာန်းခွင့်ပြုချက် အရထိုလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကို လိုအပ်လျှင်ဖွင့်ဟခွင့်ရှိစေရမည်။
(ဂ) ဖြစ်နိုင်လျှင် အလင်းပြသူသည် ထိုသို့လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေအကျိုးဆက်များကို ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်မှုမပြုမီ အလင်းပြမှုခံယူသူ(Clients)ထံသို့ အကြောင်း ကြားရမည်။
(ဃ) အလင်းပြခြင်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသော တတိယလူကို ထိုသတင်းအချက်များ ထုတ်ဖော် ပြောပြရန်လိုအပ်ပါက သင့်တော်သောခွင့်ပြုစာရမှသာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမည်။
(င) ထိုသတင်းအချက်အလက်များသည် ဥပဒေအရလိုအပ်၍ဖြစ်စေ၊ အလင်းပြမှုခံယူသူ သို့မဟုတ် အခြားသောသူများကို ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အပေးအယူကိစ္စတစ်ခုခုရှိနေပါက အလင်း ပြသူသည် ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ရမည်။
၅။	အလင်းပြခြင်းပညာ သင်တန်းများ
အလင်းပြသူများကိုပြန်လည်သင်တန်းပို့ချပေးရသောအလင်းပြသူများသည် မိမိတို့၏သင်တန်း အစီအစဉ်များကိုသေချာကောင်းမွန်စွာ စဉ်းစားပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် သင်တန်းသားများအမှန်တကယ် လိုအပ်သောအရာများကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန်လုပ်ဆောင်ရမည်။
၅-၀၂	သင်တန်းအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သောအရာများ
အခြားသောအလင်းပြသူများကို ပြန်လည်သင်တန်းပို့ချပေးရသော အလင်းပြသူများသည် မိမိတို့ပို့ချသောသင်တန်းအားဖြင့် မှားယွင်းသောလမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်း မပြုရ။
အလင်းပြသူများကိုပြန်လည်သင်တန်းပို့ချပေးရသော အလင်းပြသူများသည် သင်တန်းသား များအားကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဝါဒများကို အလျဉ်းသင့်သည့်အတိုင်းအသိပေးပြီး ထိုကျင့်ဝတ်များကို သင်တန်းကာလတစ်လျှောက်လုံး လိုက်နာကြရမည်။
၅-၀၄	သင်တန်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်
အလင်းပြသူများသည် အခြားသောအလင်းပြသူများကိုသင်တန်းပို့ချရာတွင် မိမိတို့၏သင်တန်း ဆိုင်ရာအကန့်အသတ်များကို ကြည့်မြင်ရန်သဘောကျပြီး မိမိတို့အနေဖြင့်အခြားသောအလင်းပြ သူများကိုသင်တန်းပို့ချရန် လုံလောက်သောအတွေ့အကြုံရှိသည်ဟု ယုံကြည်မှုအပြည့်မရှိပါက ထိုသင်တန်းသားများအား အခြားသောအလင်းပြသူ သို့မဟုတ် သင်တန်းများသို့ ရည်ညွှန်းလွှဲပြောင်း ပေးရမည်။
၆။	အလင်းပြခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနပြုချက်များနှင့် သတင်းထုတ်ပြန်မှု
၆-၀၁။	သုတေသနပြုရန် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း
(က) သုတေသနပြုမှုလုပ်ဆောင်မည့် အလင်းပြသူများသည် ထိုသုတေသနလုပ်ငန်းကို သိပ္ပံနည်းကျ အသိအမှတ်ပြုစံနှုန်းများအတိုင်း ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးလုပ်ဆောင်ရမည်။
(ခ) သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုစီစဉ်ရာတွင် စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များအား မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုမိခြင်းမဖြစ်စေရန် ပြင်ဆင်ရပါမည်။
(ဂ) ထိုသုတေသနလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်သော အလင်းပြသူများသည် လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရမည်။ သို့တည်းမဟုတ် ထိုသုတေသနလုပ်ဆောင်မှုကို ကွပ်ကဲကြီးကြပ်နိုင်သော အခြားသောသိပ္ပံပညာရပ်များဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်။
(ဃ) ထိုသုတေသနလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဌာနေတိုင်းပြည်၏ဥပဒေများနှင့်အညီ လုပ်ဆောင် ရမည်။
(က) အပိုဒ်(ခ)တွင် ဖော်ပြမည့်အခြေအနေမှလွဲ၍ သုတေသနအဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းထံမှ ခွင့်ပြုချက်ကိုရရှိထားရမည်။
(ခ) အထူးကိစ္စရပ်များဖြစ်သော အမည်မသိစစ်ဆေးမှုများ သို့မဟုတ် လူသားတို့၏သဘာဝကို လေ့လာသောကိစ္စမျိုးတွင် သုတေသနအဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းထံမှ ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူရန် မလိုအပ်ပေ။
(ဂ) သုတေသနပြုလုပ်သောအကြောင်းအရာနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို လူအများနားလည်နိုင်သော ဘာသာစကားဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များသို့ သတင်းပေးပို့မည်။
(ဃ) သုတေသနအဖွဲ့ဝင်များအား သုတေသနလုပ်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်မှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော အကျိုးဆက်များနှင့် သုတေသနအဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုးရလဒ်များအတွက် သင့်လျော် သည့်အတိုင်း ကာကွယ်မှုပေးရမည်။
(င) သုတေသနအဖွဲ့ဝင်များအတွက် ဆွဲဆောင်မှုမက်လုံးပေးခြင်းများရှိခဲ့လျှင် ထိုမက်လုံးပေးမှုသည် လွန်ကဲသော သို့မဟုတ် သင့်တင့်မှုမရှိသောကမ်းလှမ်းမှု မဖြစ်စေရ။
သုတေသနရလဒ်များကိုတင်ပြပေးရမည့် အခြေအနေမျိုးတွင် အလင်းပြသူများသည် သုတေ သနရလဒ်အဖြေများကို လိမ်ညာလုပ်ကြံတင်ပြခြင်းမပြုရ။ ထို့အပြင် သုတေသနပြုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း သောသိသာထင်ရှားသည့်မှားယွင်းမှုတစ်ခုခုကို နောင်တစ်ချိန်တွင်တွေ့ရပါက ထိုအမှားကိုပြင်ဆင်ရန် သင့်တော်သောပြင်ဆင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရမည်။
အလင်းပြသူများသည် အခြားသောသူများ၏ သုတေသနပြုချက် သို့မဟုတ် ဒေတာအချက် အလက်များကို ထိုတွေ့ရှိတီထွင်သူ၏ ခွင့်ပြုစာကို ကြိုတင်ရယူခြင်းမရှိဘဲ ခိုးယူကူးချခြင်းမပြုရ။
၆-၀၅။	ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းအတွက် အသိအမှတ်ပြုခြင်း
နညျးပွသာမိမိတို့ကိုယျပိုငျအလုပျအတှကျတာဝနျနှငျ့အကွှေးဝယျ ယူ. , အခွားသူမြားအား '' အလုပျတှကေိုအသုံးပွုတဲ့အခါအမွဲသငျ့လြျောသောထညျ့သှငျးတှကျခကျြမှုပေးပါ။
၆-၀၆။	ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျသော ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုတစ်ခုခုကို ဝေဖန်သုံးသပ်ပေးရသော အလင်းပြသူများသည် ထိုလုပ်ဆောင်မှု၏ လျှို့ဝှက်အပ်သောအရာများကို လေးစားရမည်။ ထို့အပြင် ထိုလုပ်ဆောင်မှုကိုတင်ပြသော စာရေးသူ အား ထိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုအတွက် အသိအမှတ်ပြုပေးရမည်။
အခန်း ၆-၀၄ မှ ၆-၀၆ သည် အလင်းပြသူများ၏ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်သည်။.
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသများကို DownLoad ရယူပါ။